Ra’isal Wasaare Saacid oo ka duulay Caabudwaaq ( Dhegaysi) – Radio Daljir
Maarso 6, 2013 12:40 g 0
Caabudwaaq, March 6, Ra’isal Wasaaraha Dawlada Federalka ah ee Soomaaaliya Md ?Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid )oo shalay gaarey magaalada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi.
Waftiga Ra’isal Wasaarha ayaa waxaa garoonka ku sagoontiyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gudiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Caabudwaaq.
Gudiga Gaoronka ayaa Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya ka codsaday waxyaabo ka dhiman garoonka in laga taaageero, waxayna Ra’isal Wasaare Saacid ka codsadeen inuu codsigooda gaarsiiyo golayaasha Dawlada.
Ra’isal Wasaaraha Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ( Saacid ) oo kulamo gooni gooni ah kadib saxaafada kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Caabudwaaq ayaa bulshada reer Caabudwaaq ku amaan waxqabadka ay muujiyeen iyo sida ay garoonka u dhsiteen.
Caawa iyo Daljir, arbaca, March 6, Maxamuud Cabdi Ibraahim (Daljir Boosaaso)